Midzanga kana kupisa: ndeipi isina kukuvadza zvakanyanya? | Karman® Mawiricheya
Wanga uchifunga kuti kufema hakuna kukuvadza iwe pane izvo zviviri? Zvakanaka, imi mose makarurama uye makanganisa. Zvidzidzo zvenguva zvakaratidza kuti kune mashoma mashoma emuchetura mukuputika. Asi vazhinji vari kutora mukana wechigadzirwa. Icho chaicho chikonzero chekuti vanhu vari kuchinja kune vaping ndiko kuwedzera kweiyo mutengo zveFodya nefodya. Zvinoenderana nekutsvaga kweiyo Royal College yeVanachiremba, vakaratidza kuti vaping 95% yakachengeteka pane kuputa. Nekuti hapana dota Rakabatana nemhepo. Kuchinjira kumhepo kunotendera mushandisi kuti anzwe hutano zvinobatsira.
Iwe unofanirwa kubhadhara zvizere vape yako usati washandisa kuti uwane rubatsiro kwenguva yakareba. Kana vape yako isiri kushanda nemazvo, unogona kuchinja bhatiri.
3. Tarisa Leakage usati washandisa
utano zvinobatsira inosanganisira kugona kwemapapu, hutano hweganda, kunatsiridza kuravira uye kunhuwidza, kutenderera, uye hutsanana hwemukanwa. Zvino, sezvo isu tasimbisa chokwadi chekuti vaping yakachengeteka kupfuura kuputa fodya, regai 's zvinopa iwe mamwe matipi kana iwe uri wekutanga-nguva vape mushandisi. Pasina imwezve ado, ngatipindei imomo!
5 Matipi ekubudirira kweKutanga Nguva Vapers - Vaping haina kukuvadza
1. Tora E-Muto weGaka Rakanaka
Vanhu vazhinji vanofarira kufema nekuda kwekunhuhwirira kwayo uye kuravira. Kana iwe ukatenga kubva kuchiratidzo chisingazivikanwe zvakanyanya, haugone kuwana iyo chaiyo kuravira-saka kutenga e-muto kubva kuchiratidzo kunokurudzirwa zvikuru.
2. Charge Vape wako Zvizere
Dhizaini yeiyo vape ndeye mushandisi-inoshamwaridzika uye inoshanda. Asi dzimwe nguva, iyo vape iri kutanga kubuda, uye iyo inotungamira chikonzero ndechekuti hausi kubata vape nenzira kwayo. Saka gara uchitarisa Kubuda usati washandisa.
Kekutanga iwe paunotanga kupenga, iwe unofanirwa kunakirwa nguva dzese dzayo. Iwe unogona kuwana chiitiko chisingafadzi kana iwe ukatora madhiragi mahombe evape kekutanga. Zorora uye unakirwe neruzivo. Rangarira kuti vaping haina kukuvadza zvakanyanya. Usatanga kuvhunduka, zvichave zvakanaka!
5. Nakidzwa With Vape
Iyo kit inosanganisira yekadhi yeVaporFi kadhi, yekuchaja adapta, matatu akajeka matangi, imwe yakajairwa Express bhatiri, imwe 30ml bhodhoro yesarudzo yako yekuravira, imwe yepamusoro-inokwana Express bhatiri, USB chajaja, uye mushandisi bhuku.
Vanhu vazhinji vanonetseka kuti chimwe chinhu chinova chisina kunaka. Yekutanga nguva vaper inofanira kufara nayo kuti unzwe kunakirwa.
Ndeipi Vape yakakunakira iwe izvozvi iwe uchiziva kuti vaping haina kukuvadza zvakanyanya.
Imwe yenzvimbo dzakanakisa dzevape ndeye OzVapour, iyo inosimbiswa muAustralia. Iyo ndeimwe yemasangano ane mukurumbira kutenga ako mafuru kubva.
1. Vaper Humambo-V-PACK II Kit
Izvi zvakapusa uye zvakanakisa e-mudzanga wevatangi vekushandisa. Iyo ine inotakurika yekuchaja ficha ine maviri Mabhatiri. Iko kugona kwe bhatiri rega ndeye 1200mAh.
Chikwata chega chega chinouya, mabhodhoro maviri e25ml ePlatinam e-liquid mutsetse brand, adapter yemadziro, 3-pack yeEX blanks, charger yakajeka ine maEX maviri. Mabhatiri, uye bhuku remushandisi.
Unogona kuwana ese E-midzanga pane iyo OzVapour webhusaiti kubvira OzVapour inopa Vapers akanakisa muAustralia.
Sezvauri kuona, kufema hakuna kukuvadza. Ichi ichokwadi kana ichienzaniswa nemidzanga yechinyakare. Chokwadi vaping haina kukuvadza. Kana iwe wakambove munharaunda uchitsvaga wiricheya, unogona kutarisa kumusoro Transpring Technology | E-Commerce (bhizimusiobhunga.org). Kune nyika yeruzivo nezve vaping uye zvine hukama zvigadzirwa pano uye nezvimwe. Zvewheelchair simudza, kune ese ari maviri mabvazuva uye magedhi ekumadokero paSan Jose neAreneth Ave.Vazhinji vanovhiringidzika kana pano kune akakura saizi yekugovera inotora. Isu tiri vashoma vane kambani ine zvinhu zvakanyorwa neSBM
Zvakanakira Kuva Nezvinobatsira Zvekurapa Midziyo Iri Pedyo
Matipi Ekufamba neWiricheya
kupinda Izvi re muna Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya uye tagged kusvuta, vaping, nhau dzewiricheya, kufamba newiricheya, mavhiripu.